पक्कै, प्रत्येक प्रयोगकर्ता ढिलो होस् वा चाँडो जानकारी अधिकतम रकम संरक्षण गर्दा, कागजात गर्न PDF रूपान्तरण गर्न कसरी प्रश्न सामना गर्नेछ।
सबै को पहिलो, यो कि PDF फाइलहरू, नियम, हो उल्लेख हुनुपर्छ इलेक्ट्रोनिक कागजातहरू मुद्रित उत्पादनहरु पेश्की लागि। ग्राफिक PDF-कागजात सुरुमा एक विशेष कार्यक्रममा तयार, र पछि, जस्तै, मुद्रण वा विद्युतीय प्रणाली फैलाउने लागि PDF हस्तान्तरण।
PDF विद्यार्थी, को मुख्य रूप विद्यार्थीहरूको लागि, पहिलो स्थानमा, कागजातमा रूपान्तरण कसरी रोचक जानकारी उच्च विद्यालय विद्यार्थी, शिक्षक र शैक्षिक। यस्तो निबंध, रिपोर्ट, रिपोर्ट, लेख वा सम्झौता रूपमा, आफ्नै कागजात तयार गर्न फाइल को एक खण्ड प्रयोग गर्न आवश्यकता सामना सबैलाई ती छोटो मा।
मेरो लेखमा म, यो मुद्दा सम्बोधन गर्न धेरै तरिका बाहिर इशारा कागजातमा PDF रूपान्तरण गर्ने बारे थप बताउन चाहन्छु।
तसर्थ, माथि परिवर्तन दुई तरिकामा गर्न सकिन्छ:
अनलाइन संसाधन को एक किसिम को प्रयोग गरेर। RuNet आज यस्तो रूपान्तरण भेटी बिल्कुल निःशुल्क छ धेरै साइटहरु पाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात् केही सेकेन्डमा आफ्नो PDF विस्तार (आफ्नो रुचि) PNG, BMP, झगडा, jpg, txt, RTF वा कागजात पाठ वा ग्राफिक प्रारूप रूपान्तरित हुनेछ। इच्छित, पूर्व-निर्धारित ढाँचामा समाप्त कागजात आफ्नो कम्प्युटर को डेस्कटप सीधै पठाइनेछ, वा ई-मेल गर्न जिप-संग्रह को रूप मा।
मुख्य बेफाइदा: एक नियम, यस्तो परिवर्तनीय सीमित जानकारी को राशि रूपमा। केही समय पछि साइट प्रशासन फेरि कसरी कागजात (वा जो) गर्न pdf प्रारूप रूपान्तरण गर्न विस्तृत तिमीहरूलाई भन्छु, तर पैसा को लागि हुनेछ।
यो विधि इन्टरनेटमा स्थिर र स्थिर पहुँच घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ गर्नेहरूका लागि उपयुक्त छ।
म मेरो राय, योग्य साइटहरु एक योजना यस्तो मा, आफ्नो केही ध्यान गर्न ल्याउन चाहनुहुन्छ:
www.freepdfconvert.com - अंग्रेजी भाषाको सामग्री, तर समस्या यो सामान्यतया पनि एक व्यक्तिमा उत्पन्न गर्दैन विदेशी भाषा बल्लतल्ल बोल्न। म के गर्नुपर्छ? - तपाईंको कम्प्युटरबाट इच्छित PDF फाइल चयन र अनुवाद जो "रूपान्तरण" बटन थिच्नुहोस् "परिवर्तन।" केही केही सेकेन्ड: परिणाम लागि लामो पर्खाइ छैन आवश्यक छ। कि पछि सेवा तपाईं जिप-संग्रह डाउनलोड गर्न लिंक प्रदान गर्नेछ। तपाईं परीक्षण र आफ्नो इमेल बक्समा निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ त र फिर्ता जानुहोस्। अब नराम्रो समाचार: स्थिर darmovschinki आशा छैन! हो, सेवा पूर्ण निःशुल्क छ। तर! यो आधा एक घण्टा मात्र एक कागजात रूपान्तरण गर्न स्वतन्त्र छ। काम को यस्तो तीव्रता तपाईं अनुरूप छैन भने, तपाईंले9299 डलरसम्म देखि भुक्तानी गर्न हुनेछ। अमेरिकी। राशि इरादा स्थानान्तरण मात्रा मा निर्भर गर्दछ।
www.pdftoword.com - यो साइट अघिल्लो एक भन्दा राम्रो काम गर्दछ। रूपान्तरण सिद्धान्त नै हो। हुनत यो मामला मा तपाईं आफ्नो ई-मेल ठेगाना समावेश गर्न पक्का हुन छ। अनलाइन स्रोत प्रयोग गर्न पूर्ण निःशुल्क छ, तर तपाईंले आफ्नो कम्प्युटरमा आवेदन डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने, बाहिर काँटा छ। साइटको विपक्ष: कसरी गर्दा गुणस्तर कायम राख्न, कागजात गर्न PDF रूपान्तरण गर्न छिटो र केही सेकेन्डमा? - बस www.pdftoword.com प्रयोग नगर्नुहोस्! सर्भर अक्सर लोडमा छ, अस्थिर, समय समयमा त्रुटि सन्देश उत्पन्न गर्छ।
www.pdfonline.com - अर्को अंग्रेजी साइट। मेनु एकदम सरल छ। एक विशेषता सुविधा: यो मद्दत तपाईंलाई दुवै कागजातमा PDF रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ, र विपरित! आफ्नो घर कम्प्युटर कार्यक्रम को एक परीक्षण संस्करण डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नकारात्मक अंक: गर्दा धेरै स्थिर www.pdftoword.com काम, तर अझै पनि "ग्लिचहरू" कहिले काँही। सबै एउटै अत्यधिक सर्भर भीड दोष।
हामी फेला पार्न र एक विशेष कार्यक्रम डाउनलोड गर्नुहोस्। कुनै पनि आवेदन घर प्रयोगको लागि अभिप्रेरित छ। यसलाई सही मूल हेडर फन्ट, पृष्ठ मा पाठ को स्थान, टेबल, सूची दुरुस्त म्यापिङ, र यी चिन्ह लगाइएको अनुच्छेद सहित विस्तार कागजात पुन: सिर्जना गर्न सक्षम छ। , कि परिवर्तित कागजात सुट गर्न लगभग 100% समान हुनेछ छ। कृपया याद गर्नुहोस् कि यी सबै कार्यक्रम डेमो संस्करण मा सामान्यतया प्रदान गरिएका हुन्छन्।
FAT32 फाइल सिस्टम - एक रोचक इतिहास संग एक प्रणाली
STL-ढाँचा र सुविधाहरू
"Teralidzhen" दबाइ। प्रयोगको लागि निर्देशन
एन्ड्री ग्रिडोभ: चाउचाउ अभिनेताहरूलाई वारिस
एलसीडी "ISKRA", ऊफा विकासकर्ता, पूर्वाधार समीक्षा। ऊफा नयाँ
कसरी विश्व पेन्सिल चरणमा आकर्षित गर्न?
मारियो Lemieux - क्यानाडा हकी खेलाडी। जीवनी
विकास र gametes को संरचना
प्रोटिन सही र अधिकतम लाभ कसरी बनाउन